Qorayaasha Martech | Martech Zone
The qorayaasha ka mid ah Martech zone waa ururinta ganacsiga, iibka, suuqgeynta, iyo xirfadlayaal teknolojiyad oo si wada jir ah u bixiya khibrad dhinacyo dhowr ah, oo ay kujiraan suuqgeynta sumadda, xiriirka bulshada, suuq-bixinta-gujinta, iibinta, suuqgeynta mashiinka raadinta, suuqgeynta moobiilka, suuqgeynta internetka, ganacsiga , falanqaynta, adeegsiga, iyo tikniyoolajiyadda suuqgeynta.
Waa kuwan qorayaashii ugu dambeeyay ee wax ku deeqa:
Maqaallada ugu dambeeyay: Shaacin la'aanta Angi Roofing iyo khilaafka xiisaha waa in ay soo jeediyaan xoogaa dareen ah
Maqaallada ugu dambeeyay: Waagii Hore, Hadda, iyo Mustaqbalka Saamaynta Suuqgeynta Muuqaalka Dhulka
Ann Smarty waa sumadda iyo maamulaha bulshada ee Suuqgeynta Internetka Ninjas iyo aasaasaha Viral Content Bee. Xirfadda kobcinta mashiinka raadinta Ann waxay bilaabatay 2010. Iyadu waa tifaftirihii hore ee madaxa joornaalka Matoorka Raadinta waxayna wax ku biirisay raadinta caanka ah iyo baloogyada bulshada, oo ay ku jiraan Isbeddellada Ganacsiga Yaryar iyo Mashable.
Maqaallada ugu dambeeyay: Sida Loo Wado Gaadiid Badan Iyo Wax Ka Bedelka Baraha Bulshada
Elizabeth Shydlovich waa Madaxa Suuqgeynta Gudaha ee Awario, aalad SaaS. Iyadu waa khabiir suuqgeyn ah oo ka caawisa ganacsiyada softiweerka inay ka faa'iidaystaan ​​xeeladaha suuqgeynta si ay u helaan macaamiisha, u kaxeeyaan taraafikada, u abuuraan wacyigelin, una kordhiyaan iibka.
Maqaallada ugu dambeeyay: 7 Aaladaha loogu talagalay Cilmi-baarista Suuqgeynta Saamaynlaha oo ku habboon Nichegaaga
Isagoo ah Madaxa Suuqgeynta, Ed Breault ayaa mas'uul ka ah Aprimo's sumadda iyo koritaanka. Waxa uu horay u sii wadaa istiraatijiyada suuqa-to-suuqa ee ururka ee B2B SaaS iyada oo adeegsanaysa qaybaheeda Maareynta Hantida Dijitaalka ah iyo Qaybaha Maareynta Ilaha Suuqgeynta. Waxa uu isku daraa khibradda suuq-geynta kobaca oo leh asal ballaadhan oo ku saabsan horumarinta sumadda iyo xiisaha horumarinta barnaamijyada suuq-geynta xisaabaadka ee dhisa wacyiga, kala duwanaanta, baahida, iyo ugu dambeyntii dakhliga.
Maqaallada ugu dambeeyay: 7 Siyadood ee saxda ah DAM ay u wanaajin karto Waxqabadka astaantaada
Maqaallada ugu dambeeyay: 6 Tusaalooyinka Qalabka Suuqgeynta Isticmaalka Sirdoonka Artificial (AI)
Maqaallada ugu dambeeyay: Heshiiska Kadib: Sida loola dhaqmo Macaamiisha Habka Guusha Macmiilka
Jonathan Low waa mid ka mid ah hal-abuurka ganacsi ee ugu caansan Denmark. Løw waa aasaasihii Sheekada boodada, oo ah AI-based stock-photo platform kaas oo loo yaqaan "Netflix of images." JumpStory waxay hadda macaamiil ku leedahay in ka badan 150 waddan waxayna u koraysaa si degdeg ah.
Maqaallada ugu dambeeyay: Sida Loo Sameeyo Sumad Sax Ah
Max waa aasaasaha iyo maamulaha guud ee Spectrm - madal suuq-geyneed-kod-la'aan ah oo suuq-geyneed oo loogu talagalay sumadaha si loogu beddelo macaamiisha raadinta, bulshada, iyo bandhigga. Spectrm chatbot analytics, xalinta iswada suuq geynta iyo wada sheekaysiga AI waxay sahlaysaa in la shakhsiyeeyo khibradaha macmiilka cabir ahaan.
Maqaallada ugu dambeeyay: 5 Cashar Oo Laga Bartay In Ka Badan 30 Milyan Oo Qof Iyo Hal Is-dhexgalka Macmiil 2021
Tobanaan sano ee Vlad ee xigmadda ganacsi iyo waayo-aragnimada dhismaha ganacsiga ayaa u oggolaaday inuu si guul leh u hagayo koox ganacsi oo kala duwan, iyo hal-abuurada ganacsiga ee koraya shirkadahooda. Khabiir la aqoonsan yahay oo ku saabsan dhinacyada beddelka dhaqanka ururka iyo horumarinta hoggaaminta, B2B Iibka, Suuqgeynta, ayaa in ka badan 10 sano ku qaatay dhismaha alaabada tignoolajiyada, asal ahaan ka soo jeeda shabakadaha isgaarsiinta iyo injineernimada qalabka elektiroonigga ah.
Maqaallada ugu dambeeyay: 6 Hababka ugu Wanaagsan ee Kordhinta Soo Noqoshada Maalgashiga (ROI) ee Suuqgeyntaaga iimaylka
Ravi Swaminathan waa aasaasaha iyo madaxa fulinta Hawsha Aadanaha, Madal tabobar dijitaal ah oo waqtiga-dhabta ah oo isku xirta shaqaale kasta 1: 1 oo leh shabakad caalami ah oo tababarayaal ah oo ku saabsan wicitaanka fiidiyowga ee ku dhawaad ​​​​1000 mawduucyo shaqo maalmeed iyo nolol shakhsi ah.
Maqaallada ugu dambeeyay: TaskHuman: Platform Tababarka Iibka Dijital ah ee-Waqtiga dhabta ah
Madaxa Admitad ConvertSocial. Ksana waxay ahayd af-hayeenka shirarka heer caalami ee suuq-geynta xiriirka waxayna xiriir la leedahay in ka badan macaamiisha 35,000 ee Admitad ConvertSocial, oo ku lug leh warshadaha blog-ga, taas oo u oggolaanaysa inay had iyo jeer ka warqabto isbeddellada ugu dambeeyay ee adduunka ee saameeyayaasha. Kahor intaanu ku biirin kooxda Admitad, Ksana waxa ay ka shaqaynaysay suuqgeyn xidhiidhsan iyo lacag abuurka nuxurka in ka badan 7 sano, iyada oo ka caawinaysa summadaha waaweyn in ay bilaabaan xalal iyaga u gaar ah raadinta xog-ururinta adeegyada safarka.
Maqaallada ugu dambeeyay: 7 Xeelado Suuqgeeyayaasha Ku Xidhan ee Guulaysan Waxay Isticmaalaan Si Ay Dakhliga Ugu Keeno Noocyada Ay Kor U Qaadaan
Adam Ortman waa madaxweyne ku xigeenka sare ee koritaanka iyo hal-abuurka ee Farsameeyaha Warbaahinta + Falanqaynta, wakaalad warbaahineed oo dhamaystiran. Isku darka tobanka sano ee waayo-aragnimada ee goobta wakaalada warbaahinta iyo aasaaska akadeemiyadda ee cilmu-nafsiga macaamiisha, Adam wuxuu qiimeeyaa hogaaminta iyo soo ifbaxa dhijitaalka, bulshada, mobilada, iyo e-ganacsiga e-ganacsiga iyo isbeddellada si loo go'aamiyo sida ay qiimo ugu keeni karaan maalgashadayaasha warbaahinta macaamiisha.
Maqaallada ugu dambeeyay: Hababka Cusub ee Xayeysiiska Dijital ah Kaddib Kukiyada Qolalka Saddexaad Ma jiraan
Kyle waa horumariye software iyo aasaasihii Collabstr, goob isku xidha summadaha iyo abuurayaasha nuxurka leh, suuqa ugu wayn aduunka si loo helo loogana shaqaaleysiiyo saameeyayaasha.
Maqaallada ugu dambeeyay: Sida TikTok Loogu Isticmaalo Suuqgeynta B2B
Aleksandra waa CMO at GetResponse, waxay hagaysaa suuqgeynta iyo kobaca SaaS ee caalamiga ah. Iyada oo ay ku kacday falanqaynta xogta iyo jabsiga kobaca, waxay samaysay xeelado suuq-geyneed oo gaar ah oo loogu talagalay summadaha caalamiga ah (Ex-Uber) iyo kuwa farsamada bilaabay si isku mid ah. Waxay heshay ganacsigeeda & waxbarashada hogaaminta iyadoo ka qalin jabinaysa Waxbarashada Fulinta Harvard iyo hab-dhaqanka xogta ku salaysan ee suuqgeyneed ee sayniska xogta MA ee Warsaw. Ola waxay si firfircoon u taageertaa bilawga gobolka CEE, oo ah lataliye u ah kuwa aan faa'iido doonka ahayn iyo Google for Startups barnaamijyada la talinta. fuusha hiwaayadda, cayaaryahan biyaano ee ku cusub, iyo taageere weyn ee dhaqanka shaqada ee ugu horeeya.
Maqaallada ugu dambeeyay: Hagaha Fudud ee Soo Jiidashada Hogaamintaada Dijital ah ee Kowaad
Kirk Enright waa aasaasaha & maamulaha guud Shaqsiyaadka Awooda, madal shakhsi iibsade ootamaatig ah oo loogu talagalay suuq-geynta iyo xirfadlayaasha iibka. Waxa uu bilaabay xirfadiisa xayaysiis & suuqgeyn sida nuqul qore ah laakiin aakhirkii waxa uu u soo baxay doorar badan oo ka mid ah suuq-geynta, horumarinta nuxurka, horumarinta alaabta, summaynta, iyo la-talinta maamulka.
Maqaallada ugu dambeeyay: Sida Loo Doorto Qaab-dhismeedka Shakhsiyaadka Iibsadaada ah
Farah Kim waa suuqgeeye wax soo saarka ee aadanaha udub dhexaad u ah kaas oo ku takhasusay fududaynta macluumaadka adag fikrado la taaban karo oo loogu talagalay dhagaystayaasha ganacsiga. Waxay la dhacsan tahay maareynta xogta waxayna rabtay inay ka caawiso ganacsiyada inay ka gudbaan wax-qabad la'aanta shaqada ee ay sababto hab-dhaqannada maaraynta xogta ee aan waxtarka lahayn.
Maqaallada ugu dambeeyay: Suuqgeyntu waxay u baahan tahay xog tayo leh si ay xog u noqoto - Halgan & Xal
Nicolás Antonio Jiménez waa isku-duwaha suuqgeynta ee Widen Enterprises, oo ah adeeg bixiye adeegyada maareynta hantida dijitaalka ah ee daruurta ku saleysan. Wuxuu leeyahay taariikh kala duwan oo ku saabsan suuqgeynta, saxaafadda, maareynta macaash doonka, u doodista xorriyadda saxaafadda iyo dhiirrigelinta dimuqraadiyadda.
Maqaallada ugu dambeeyay: Waa maxay Platform Maareynta Hanti Dijital ah (DAM)?
Daniel Alvarado waa khabiir suuq geynta dhijitaalka ah iyo VP ee Tignoolajiyada ee Warbaahinta Shark Cad. Isaga ayaa mas'uul ka ah inuu hogaamiyo koox horumariye heer caalami ah oo ka dambeeya White Shark Media's Compass, oo ah goob wax-ku-ool ah oo iibka ah oo loogu talagalay wakaaladaha eegaya inay cabbiraan faylalka-bixinta-riix-guji. Daniel waxa uu leeyahay in ka badan 8 sano oo waayo-aragnimo ah oo ka shaqeynaya warshadaha tignoolajiyada suuq-geynta. Waxa uu taageero ka bixiyay istaraatiijiyad suuq-geyneed iyo mawqif horumarinta software ee doorar kala duwan, oo ay ku jiraan Maamulaha Xayeysiinta Dijital ah, Software Architect, iyo VP of Tech. Asalkii hore ee tignoolajiyada, Daniel wuxuu ka caawiyaa ururada inay isticmaalaan tignoolajiyada si ay u abuuraan khibrado macno leh, fududeeyaan hawlaha adag oo ay qiime ugu soo saaraan macaamiishooda.
Maqaallada ugu dambeeyay: Compass: Aaladaha Awood-siinta Iibka ee Lagu Iibinayo Mushaharka Halkii Adeegyada Suuqgeynta